Nhau - Ndeapi Rudzi rweGirazi raunoda Kupfeka kune iro Ramangwana?
Pane imwe nguva, isu tese takanzwa kuti vasikana vakuru vakapfeka magirazi vaive maNerds, vachinzwa kusagadzikana uye kushaya pfungwa yekuseka. Nekudaro, mumakore achangopfuura, mazhinji makuru emhando yemhando yepamusoro-soro akavatsigira, uye magirazi ayo munhu wese aisada akangoerekana ava zvinhu zvemafashoni uye ikava tsika nyowani.
Vasikana vane maziso mana vaipfeka magirazi vachingo tarisa pane mashandiro, asi ikozvino ivo vanyanya kutarisisa dhizaini dhizaini. Ivo vanotoshongedza magirazi akasiyana siyana kumba kuti aenzanise masitaera ezuva nezuva.
Iyi geek chic maitiro akaunzwa kubva ku2019 kusvika 2020. Paunoona iyo gucci, kuPrada, fendi, chloe, uye kunyangwe Chanel vari kutsigira, ndinotenda kuti maitiro aya egirazi akapfava haamiswe.
Muchokwadi, sekureba sekunge izvo zvishongedzo zvasarudzwa mushe, zvinongoerekana zvinowedzera mapoinzi kutarisiko. Naizvozvo, semusikana ane mufashoni, unofanira kutanga wadzidza kusarudza furemu yakakodzera iwe.
Kana vanhu vakagona kuona iyo hibernation tekinoroji mune yesainzi fungidziro inoverengeka "Vatatu-Muviri", ndeapi magirazi egirazi aunoda kupfeka kune ramangwana?
Ndeapi magirazi ezuva anozove asina kujairika kunyangwe mune ramangwana, achigara achitungamira iwo maitiro, kunyangwe kupfuura nguva?
Munguva pfupi yapfuura, kune maviri akasarudzika sainzi ngano mafirimu, "Blade Runner 2049" uye "Akagadzirira Player Mumwe". Ose mafirimu anotsanangura "ramangwana nyika", asi ramangwana nyika inoratidzwa mumafirimu maviri aya akasiyana zvachose. of.
Munyika ye "Ready Player Mumwe", vanhu vakavimba zvizere nepamusoro pechiitiko chakaunzwa neiyo yepamusoro-magumo VR.
Nyika iri mu "Blade Runner 2049" yakadhakwa uye yakasara, uye tekinoroji yemasimba ese yakadzamisa kusurukirwa kwevanhu. Magirazi ezuva epamberi atinozivisa kwauri, avant-garde hunhu hwawo.
Mune firimu re cyberpunk uye terevhizheni inoshanda, ramangwana renyika rinowanzo kuputswa. Mune ramangwana guta rine skyscrapers uye inoda kuve matatu-mativi, kune zvekare huwandu hwakawanda hwevashoma-vagari vagari nemumagariro enharaunda vanogara mumigwagwa yakazara yakazara. Tekinoroji yepamberi, mwenje wakanaka weeon uye vanhu vadiki, rudo rwakaomarara, ruvengo neruvengo zvakasiyana zvakanyanya.
Akanaka mavara chinhu chakakosha checyberpunk. Mukutarisana netekinoroji inotonhora, mavara anomiririra hushoma uye hupfumi manzwiro evanhu. DLL5333 ine exquisite simbi mafuremu uye anoyevedza epepuru akadhinda lenzi, uye anoyevedza mavara haakanganwika.
Iyo hombe katsi magirazi furemu ine retro kuravira kwema80s yadzoka zvakare. Pamusoro pekunzwa kwekutamba uye kwakanaka, magirazi ekatsi ane mhedzisiro yekugadzirisa iwo maratidziro. Stella mccartney akatonyanya kushongedzwa neye nyeredzi mapatani. Dhizaini yacho inobata maziso uye inogona kunyatso kuve inosimbisa muchimiro. Kana iwe uchifunga kuti magirazi emonochromatic akajairika, unogona kusarudza magirazi etortoiseshell. Magirazi eTortoiseshell agara ari sarudzo yeakashongedzwa magadzirirwo, asi zvakare anogona kusimbisa hunyanzvi hwehunhu. Magirazi ezita rimwe chete kubva kuGerman dhizaini wolfgang proksch anosanganisa akasiyana zvinhu, aine caramel tortoiseshell maficha maficha uye esimbi maoko. Iyo furemu dhizaini yakapfuma mumatatu-madimikira, ayo akakodzera kwazvo kuvasikana vane fashoni vane myopia.
Semusikana anoda runako, kunze kwekushanda, fashoni zvakare yakakosha pakutenga magirazi, handiti? Kana iwe uchibvuma, saka aya ekushongedza mafuremu ndeako iwe chete! Chiso cheyeyeye yehunyanzvi kubva kuLondon yagara yakatarisana nemagirazi ayo ari ese ane fashoni uye ehunyanzvi. Iyi yakatetepa katsi-ziso simbi furemu yakashongedzwa nemaparera matatu kuruboshwe uye kurudyi mativi, uye maitiro acho akaomesesa. Pamusoro pezvekuitira hunyanzvi, mwaka uno Alexander McQueen, Gucci, Chloe uye mamwe mabrand akaunzawo akasiyana mafirita ekugadzira,
Kuberekwa kwemagirazi eaviator zvechokwadi kwakabatana zvikuru nevatyairi vendege. Ndiyo magogorosi akagadzirwa neBausch & Lomb Kambani yevatyairi vezvikepe vachipesana ne stratosphere. Iyo inotora dhizaini-yakaita dhizaini uye inogadzirwa neyakareruka simbi furemu. Kupesana nedenga rekumusoro kwekati magirazi egirazi, iyo lens yeAviator Magirazi ine dhizaini yekudonha pamativi ese, izvo zvinoita kuti vanhu vatarise pahafu yepasi yechiso. Naizvozvo, zvakare inokodzera vasikana vane zvipini zvakapinza, uye avo vane mafupi uye akapamhamha kumeso vanofanirwa kuyedza kwavo kunzvenga.